Tahriibayaal 700 Qof Ku Dhaw Oo Ilmo Yar Oo 5 Maalmood jiray Kujiro Oo La Soo Badbaadiyay+Dalalka Ay U Dhasheen | Berberatoday.com
Tahriibayaal 700 Qof Ku Dhaw Oo Ilmo Yar Oo 5 Maalmood jiray Kujiro Oo La Soo Badbaadiyay+Dalalka Ay U Dhasheen
Libiya(Berberatoday.com)-Tahriibayaal 700 qof kor u dhaafay, isla markaana uu ku jiro ilmo yar oo shan maalmood oo qudha jiray, ayaa lagu badbaadiyey meel 13 mayl u jirta xeebta Liibiya, kadib markii ay doon ay iska buuxiyeen khatar gashay.
Ilmaha yar iyo laba mataanno ah oo ay walaalo yihiin ayaa ka mid ahaa tobonnaan carruur ah oo saarna doontaas ka samaysnayd looxaanta yar yar ee badweynta Mediterranean halista ku gashay.
Tahbiirayaashan 700 gaadhaya waxa ay u badnaayen Eratariya, waxaanay kor iyo hoos iska buuxiyeen doon ay damacsanaayeen in ay ku galaan qaarada Yurub.
Shaqaalaha badbaadiyey oo u tuuray koodhadhka badbaadada, waxaana ku jiray carruur ay ka mid ahaayeen laba mataano ah oo diyaarad lagu geeyey iyaga iyo hooyadood dalka Talyaaniga si loogu daweeyo.
Dadkan oo ay badbaadiyeen shaqaalaha gargaarka ee hay’adaha Proactive Open Arms iyo Medicns San Frontieres, ayaa iska buuxiyey doontan looxa ah ee halista gelisay naftooda.
Waxa ay shaqaalaha hay’adahan sheegeen in ay gaadheen wiil maalmood jiray ah oo gacmaha aabbihii ku dhegay, halka rag dabbaasha yaqaanayna ay badda isu tureen.
Waxa ubadka iyo waalidkoodba loo qaaday dalka Talyaaniga, iyadoo la saaray markab weyn oo badbaadiyey.
Badbaadan oo goor hore oo aroornimo ah dhacay, ayaa yimi kadib markii 1,100 tahriibe laga daad gureeyey Axadii toddobaadkan doon halis ku gashay biyaha badweynta Mediterranean, halka 2,000 tahriibe oo kalena dhawr maalmood ka hor uun la badbaadiyey.
Hay’adda Socdaalka Adduunka ee IOM, ayaa sheegtay in 105,342 (Boqol iyo shan kun, saddex boqol, laba iyo afarta) tahriibe ay gaadheen dalka Talyaaniga sannadkan, kuwaasoo badankoodu ka doon ka soo raacay dalka Liibiya.
Ku dhawaad 2,726 qof oo rag, dumar iyo carruur isugu jira ayaa ku dhintay isla sannadkan iyagoo damacsana in ay doonyahaas aadka u liita ku galaan Yurub, halka laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda ay 400,000 tahriibe tahriib ku galeen dalka Talyaaniga, kuwaasoo badankoodu ka soo safray waqooyiga Afrika.